वन प्राबिधिक र कर्मचारीकै निगरानीमा काम गरेका छौंः अध्यक्ष बस्नेत -
केही समय यता उदयपुरमा बिवादित जस्तो देखिएको त्रियुगा नगरपालिका–९ स्थित रातमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शंकरकुमार बस्नेतसंग निगरानी पोष्टले गरेको कुराकानीको सारः–
बारम्बार शंकरकुमार बस्नेतकै बिरोधमा किन लाग्या होलान् यति धेरै मान्छेहरु ? जो, यसपालि पनि उत्तिकै छन् “वन” सिध्यायो भन्नेहरु ?
म लामो समयदेखि बिभिन्न संघसंस्थामा बसेर समाज सेवा गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । समाज सेवाकै क्रममा व्यक्तित्व क्षमताका बिकास, टोल र गाउँ लगायत बिभिन्न बिकासको गतिबिधिमा केही मान्छेहरु असन्तुष्टि हुनु स्वभाविकै हो । फेरि, सामुदायिक वनहरु सानो क्षेत्रमा हुने सबैमा जनकारीजकै विषय हो । त्यसलाई सदुपयोग गर्न सहज छ । त्यतिनै त्यसको संरक्षण गर्ने विषय पनि जटिल छ । कुनै व्यक्ति र समुहको निर्णयले केहि गर्न पनि पाईदैन् । केही गतिविधि भए बन ऐन अन्तरगत कार्यलयको अनुमतिबिना काम पनि गरिएको छैन । मलाई लागेको कुरा के हो भने ! जसले वनबाट लाभ लिने तर संरक्षणको कुरै गर्न नमान्ने । जसले बढी वनको दुरुपयोग गर्न खोज्ने, त्यस्ता मान्छेहरु नै मेरो पछि लागिरहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
खास कुरो चाँहि के रहेछ तपाईँको बिरोध गर्नुको पछाडि ?
वन ऐन बिपरित काम गर्नेहरुलाई बिगतमा समुहले कार्वाही गर्दै आएको छ । ती खाले व्यक्तिहरु बिना आधार बिरोध गरिरहन्छन् । त्यसमा कुनै कानुनी सत्यता छैन ।
ठ्याक्कै कस्ता–कस्ता व्यक्तिहरु होलान् त तपाईको बिरोध गर्नेहरु ? सबै समुह भित्रकै हुन् ?
वन ऐन बिपरित काम गर्नेहरुलाई कार्वाही गरेर दण्डित गराउनेनै मेरो मुख्य दोष हो । जसलाई कार्वाही गरेर दण्डित गरेको छु । अहिले तिनै व्यक्तिहरुनै म लगायत समुहको बिरोध गरिहेको छ । जो व्यक्तिहरु बिरोध गरिहेका छन्, उनीहरुलाई समाजले दण्डितनै गरिरहेका छन् । तर, बिरोध गर्नेहरु समुह भन्दा पनि बाहिरकाहरु धेरै रहेको बुझेको छु ।
समुहभित्र पनि अन्यायपूर्ण काठ बितरण भयो भन्ने छ । कतै, उपाभोक्ता भन्दा ठेकेदार मुखि त भा’छैन ?
हाम्रो समुहको लागि वन कार्यालयले दिएको स्वीकृत काठको परिधि भित्र रहेर सबैलाई उपभोक्ताहरु ख्याल गर्दै काठ बितरण गरेका छौं । स्वीकृत काठ पूर्णरुपमा आन्तिरिक खपतको लागि मात्र हो । ठेकेदारलाई त दिने कुनै कुरै भएन ।
त्यसो भए खास कुरो चाहिँ के हो त ?
रातारात वन प्रवेश गरेर चोरी निकासी गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समाएर दण्डित पनि गरिसकेको कुरा माथि पनि उल्लेख गरेको छु । धेरै त उनीहरुले मात्र बिरोध गरेर अनावश्यक बखेडा निकाल्न खोजेको हो । सत्य कुरा पनि यही नै हो ।
यसबारे आफ्नो समुह भित्र बसेर कुनै समय समिक्षा गर्नु भा’छ त ?
वन क्षेत्रभित्रको विषय र वनको गतिबिधिमा समुह र उपाभोक्ता बीच कुरा नहुने कुरै भएन । त्यसमा वनको संरक्षण र त्यसको सदुपयोग लगायतका कुरा पनि हुने गरेको छ । बिभिन्न समयमा वनलाई क्षति हुन नदिने प्रयासबारे पनि छलफल गर्दै आएका छौं । पछिलो समय “दिन आफ्नो, रात अर्काको” भन्ने उखानसंग सहमत भए । जो चोरी निकासीको प्रसङ्ग हो ।
फेरी, वन कार्यालयको आदेश भन्दा बढी नै रुख काट्नु भयो भन्ने पनि छ । बढी नै बल मिच्याई गर्ने शंकर बस्नेतको बानी, भन्ने कुरो त सत्यनै हो’की क्या’हो ?
बल मिच्याईको कुरै भएन । जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृत बिना कुनै पनि हालतमा जङ्गलबाट काठ निकाल्न पाईदैन । जे–जस्तो काठहरु स्वीकृत भएर आएको छ । वन प्राविधिकहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा काठ पनि कटान मुछान भएको छ । त्यति मात्र हैन । उपभोक्तालाई काठ बितरणको क्रममा पनि उनीहरुको सहभागिता रहेको छ । कसरी काटियो होला त आदेश भन्दा बढी रुख ? ताकी मनलाग्दी रुखहरु काट्ने अधिकारै छैन ।
ठीकठीकै अनुगमन गर्न लगाउनु त भएन नि वनको कर्मचारीहरुलाई ?
वनको कार्ययोजना अनुसार बार्षिक रुपमा प्राप्त गर्ने काठ कटान लगाएत समुहको दैनिक गतिबिधिको लागिसमेत वनका प्राबिधिक र कर्मचारीहरुसंग सल्लाहा लिने गरेका छौं । उनीहरुको राम्रो सहयोग पनि छ । त्यसैले उीिहरुकै निगरानीमा हामीले समुहमा धेरै गतिबिधि पनि गरेका छौं । अनुगमन गर्ने क्रममा उनीहरुले आफ्नै तरिकाले गरेको छन् । हामीले आफ्नै ढंगले सहयोग गरेका छौं ।
अन्त्यमा, उपभोक्ता र पाठकहरुलाई केही कुरा भन्न छुटेको छ की ?
राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनहरुमा प्रायः चोरी निकासीको काम भईरहेकै छ । त्यस्ता चोरी निकासीमा संलग्नको पहिचान गरी कानुनी कार्वाही गरौं । यसमा सबैको सहयोग अपरिहार्य छ । जति संरक्षण त्यति उत्पादन भन्ने सोचमा लागौ ।